Mareykanka iyo Turkiga oo mowqif isla mid ah ka qaatay xiisada Sacuudiga iyo Qadar | Entertainment and News Site
Home » News » Mareykanka iyo Turkiga oo mowqif isla mid ah ka qaatay xiisada Sacuudiga iyo Qadar
Mareykanka iyo Turkiga oo mowqif isla mid ah ka qaatay xiisada Sacuudiga iyo Qadar
daajis.com:- Waxaa sii xoogeysanaaya xiisada u dhexeysa dowladaha Sacuudiga iyo Qadar oo gudaha asbuucaani uu soo shaac baxay khilaafkooda.
Khilaafka diblumaasiyeed ee ka dhex aloosan labada dal ayaa waxa uu sababay in dukumiintiyo cadeymo leh ay hawada isku mariyaan iyadoo dowlada Qadar lagu eedeeyay inay kasoo horjeedo xasiloonida ka jirta dalalka Khaliijka.
Xiisada sii xoogeysaneysa ayaa waxaa faragalin kusoo sameeyay dalalka saaxiibada dhow la ah Sacuudiga iyo Qadar, oo ay kamid yihiin Turkiga iyo Mareykanka.
Mr Mevlut Cavusoglu oo ah Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa ku baaqay wada hadal in dalalka Khaliijku furaan, laguna xaliyo xiisadda wada hadal ka hor inta aan cilaaqaadka la kala qaadaan.
Rex Tillerson oo ah Wasiirka Arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa isna bayaan ka soo saaray xiisadda, waxaana uu ugu baaqay dalalka Khaliijku in ay midowgoodi ahaadaan, oo khilaafka meel iska dhigaan.
Rex Tillerson, waxa uu sheegay in mowqifka Mareykanka uu yahay midnimada dowladaha Sacuudiga iyo Qadar, isla markaana aysan diyaar u aheyn xiisad ka dhexeysa labada dhan.
Dowlada Iran oo saaxiib dhow la ah Qadar kana mid ah dalalka lagu eedeynayo carqaladeynta Khaliijka ayaa dhankeeda ka sheegtay in xiisadani ay tahay mid aan wanaag ugu jirin bariga dhexe, waxaana la is weydiinayaa sida Iran uga faa’idaysan karto walaalka Khaliijku dhankeeda u soo tuureen.
Sidoo kale, Madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa isna horay u sheegtay inuu ka dambeeyay caddaadiska ay dalalka Khaliijku saareen dawladda Qadar.
Trump ayaa sheegay in markii uu dhawaaan booqday Sacuudiga loo sheegay in dalka Qadar uu maalgaliyo “aragtida xagjirka ah”.
Talaabadaani ayaa muujineysa in Madaxda dowlada Mareykanka ay ku kala aragti duwan yihiin xiisada ka dhex aloosan labada dal, maadaama Wasiirka Arrimaha dibadda ee Maraykanka uu sheegay inay ka xun yihiin xiisada, halka Trump uu ka sheegay inuu isaga ka danbeeyay.
Posted by Bulsha Arrimaha Bulshada, Published at 17:45 and have